Jereo ny fomba chic rustique ho an'ny tranonao | Bezzia
Susana Garcia | 07/06/2021 20:00 | Decor, Fironana haingo
El ny fomba chicika ambanivohitra dia ankasitrahana ankehitriny, dia fifangaroana faribolana tsara sy maoderina, antitra sy ankehitriny. Fetsy tsara haingo ny mifanohitra, satria amin'ity fomba ity dia tsy mifikitra amin'ny fomba tokana isika ary mamorona zavatra miavaka sy manokana. Tsara kokoa ny manafangaro fomba sy mahazo trano misy toetrany noho ny kopian'ny fomba iray mety reraky ny fanamoriana.
El rican chic style dia fomba vaovao izay mitady hanome azy fomba kanto kokoa ary be pitsiny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ity karazana tontolo iainana ity dia aingam-panahy avy amin'ny firenena, habakabaka ambanivohitra, izay misy fitaovana matevina sy sombin-javatra ampiasaina, fa ny chic touch kosa manampy azy hanavao sy hahatratra ilay hakanty izay tsy ampy indraindray.
1 Fitaovana voajanahary
2 Alokaloka maivana sy voajanahary
3 Manampia voninkazo sy zavamaniry
4 Fanaka fomba frantsay
5 Marbra sy seramika
ny ny akora voajanahary dia ampahany lehibe amin'ny fomban-tany ambanivohitra, ka tsy afaka manao isika raha tsy misy azy ireo. Ny hazo ao anaty fanaka, ny rattan, ny sobika mihinana ary na ny sombin-bato aza dia tonga lafatra hamoronana atmosfera any ambanivohitra izay azonao ampidirina ny fikasihanao. Ny rustique dia tsy maintsy ho ny protagonist, satria io no fomba fototra. Ny fanaka vita amin'ny hazo dia matetika efa antitra na manana endrika ivelany sy mahery, tsy misy firavaka firy. Rihana hazo na vato matetika no ampiasaina. Etsy ankilany, wicker amin'ny kojakoja maro no ampiasaina, miaraka amin'ny harona na rugs amin'ity fitaovana tsara tarehy ity izay tena ambanivohitra tokoa.
Alokaloka maivana sy voajanahary
Amin'ity fomba ity, a hikasika maoderina kokoa amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny feo maivana dia manampy antsika amin'ny fampihenana ny fikasihan-tanana, satria ny tontolo teo aloha dia nanana hazo maizina sy feo matanjaka namono ny efitrano. Amin'ity tranga ity dia mitady alokaloka toy ny fotsy, volondavenona ary indrindra ny beige izay maivana, malefaka ary manome hafanana ihany koa. Amin'ity karazana tontolo iainana ity dia tsy misy dikany ny mitady sombin-doko maro, satria amin'ny tontolo ambanivohitra dia mazàna tsy izany.
Manampia voninkazo sy zavamaniry
Lo rustic dia misy ifandraisany betsaka amin'ny ambanivohitra sy ny natiora, noho izany ny zavamaniry sasany dia tsy mety ho banga amin'ireo toerana ireo. Ankehitriny, ny zava-maniry dia alaina be ao an-trano, zava-maniry lehibe sy kely, mba hamoronana zorony manokana. Ny hevitra dia ny manampy freshness sy loko vitsivitsy amin'ireo zavamaniry. Mitadiava vilany tsara tarehy ao anaty alokaloka na manampy vilany wicker.
Fanaka fomba frantsay
Na dia efa niresaka momba ireo teboka izay mitarika antsika amin'ny fomba any ambanivohitra aza isika dia tsy maintsy mieritreritra ny hanampy ny fikitika ihany koa. Azonao atao ny mampiditra an'io fanaka sasany amin'ny fomba frantsay. Ity fomba ity dia misy fanaka izay miendrika antsipirihany maro, mahasosotra ary misy tongony voasokitra. Ny fanampiana fanaka iray na roa amin'ny fomban'ity fomba ity dia mihoatra noho ny ampy mba hamoronana tendrony kanto kokoa. Ho fanampin'izany, ny fomba fiotazam-boaloboka dia ampahany amin'ny sombin-javatra frantsay ary noho izany dia hamorona atmosfera tena manokana isika.
Marbra sy seramika
Ireo fitaovana ambanivohitra dia mirongatra sy tsy miloko. Saingy mba hamoronana tontolo kanto kokoa dia afaka manampy karazana fitaovana hafa isika. ny marbra dia kanto tokoa ary izany no antony ampiasana azy amin'ireny tontolo iainana ireny. Izy io dia mety ho sombin-kazo ho an'ny am-patana, latabatra marbra na koa mikasika eo an-tampon'ny fanaka iray. Marbra dia kanto, indrindra raha mifidy loko toy ny volondavenona sy fotsy isika. Etsy ankilany, ny ceramika dia manana izany fikitika tsara tarehy izany ihany koa, ka azontsika ampidirina amin'ny antsipiriany kely toy ny vazy na tarehimarika haingon-trano. Ao amin'ny antsipiriany kely dia azonao atao ny mahita ilay fikitika be pitsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Ahoana ny fomba handravahana ny fomba kanto any ambanivohitra